We are ready for 'THE OSCARS 2020' - IV - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
We are ready for THE OSCARS 2020 - IV | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by रितेश December 14, 2019
पतिसँग पारपाचुके भइसकेको अधबैंसे महिला ‘ग्लोरिया बेल’ हरेक रात नाइट क्लब जाने हुन्छिन् । नाच्ने हुन्छिन् । आफैँमा हराउने हुन्छिन् ।
एकरात नाइट क्लबमा उनको भेट पत्नीसँग पारपाचुके भइसकेको ‘आर्नोल्ड’सँग भेट हुन्छ । बिस्तारै उनिहरुको सम्बन्ध अगाडि बढ्न थाल्छ । पारपाचुके भइसकेपनी आर्नोल्ड आफ्नो छोरी र भुपु-श्रीमतिलाई आर्थिक सहयोग गरिरहने हुन्छ । यही कुरा ‘ग्लोरिया’लाई खट्किन्छ ।
ग्लोरियाको पुर्व-पतिबाट दुई सन्तान भइसकेको हुन्छ । उनीहरु दुवै सेटल भइसकेका हुन्छन् । आर्नोल्डसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ । उनी फेरि आफुलाई एक्लो पाउँछिन् । फेरि भट्किन थाल्छिन् नाइट क्लबमा ।
पुरानो सम्बन्धबाट तपाईं कति टाढा भाग्न सक्नुहुन्छ ? नयाँ सम्बन्धलाई स्विकार्न तपाईंलाई कति समय लाग्छ ?
छोरा आफ्नो बुबाको खोजमा निस्केको कथा हो ‘एड एस्त्र’।
‘एड एस्त्र’ भविष्यको कथा हो । सौर्य मन्डलमा एउटा अनौठो रहस्यमय शक्तिको प्रवाह भइरहेको छ, जसले पुरै मानव जगत संकटमा छ ।
‘स्पेस कम’ले एस्ट्रोनट रोयलाई उनको बुबा जिवित हुन सक्ने खबर दिन्छन् । ‘लिमो प्रोजेक्ट’ जुन 26 वर्ष पहिला ब्रह्माण्डमा खोज गर्न स्थापना गरिएको थियो रोयको बुबाको लिडरसिपमा 16 वर्षदेखि लापत्ता थियो । रोयको बुबा ग्रह ,’नेप्चुन’मा हुनसक्ने अनुमान लगाइन्छ ।
रोय बुबालाई खोज्ने मिसनमा निस्कन्छ, चन्द्रमा, मार्च हुँदै नेप्चुनसम्म । रोयको यात्रा रोचक हुन्छ, डरलाग्दो बन्छ । बिस्तारै उनले कालो रहस्यहरुको सामना गर्नुपर्छ ।
‘अर्ल रोबर्ट’, ‘काउन्टेस कोरा’ लगायत परिवारका अरु सदस्यहरु साथै थुप्रै स्टाफहरु डाउनटाउन एबिमा बस्छन् । राजकीय भ्रमणको निम्ति ‘राजा जोर्ज पाँचौं’ र ‘रानी म्यारी’ डाउनटाउन एबिमा केही समय बस्न आउँदैछन् भन्ने जानकारी ‘बकिङ्हाम प्यालेस’ले डाउनटाउन एबिमा पठाउँछ ।
अब टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ, डाउनटाउन एबिका सदस्यहरुलाई । राजकीय भ्रमणको अवधिभरी केही कुराको कमी नहोस् भनी सबै प्रबन्ध मिलाइन्छ, खानाको, कपडाको, बस्नको सबैको । राजा-रानीलाई सेवा गर्ने मौका मिलेकोमा डाउनटाउन एबिका स्टाफहरु खुशी देखिन्छन् ।
जब राजा-रानी आउँछन् साथमा उनीहरुकै निजि स्टाफहरु पनि आउँछन् । फेरि टाउको दुखाइ सुरु हुन्छ ।
यही नाम, कहानीमा, टिभी सिरिज पनि छ जो अत्यन्तै सफल छ । त्यही सफलतालाई फिल्मले पनि निरन्तरता दिएको छ । एकदमै मज्जाको छ फिल्म ।
यो फिल्म हेरिरहँदा मलाई अरु दुई फिल्म- ‘द सेप्रेसन’ र ‘द लभलेस’को झ-झल्को आइरह्यो । यी तिनै फिल्म पारपाचुके सम्बन्धी छ ।
‘चार्ली’ एक सफल नाटक निर्देशक हुन् । उनले आफ्नो पत्नी ‘निकोल’लाई आफ्नो नाटकमा अभिनय गराउँछन् । दुई बिचको असमझदारीले गर्दा दम्पती छुट्टिने निर्णयमा पुग्छन् ।
निकोललाई टेलिभिजनमा राम्रो रोलको लागि बाहिरबाट अफर आउँछ । उनले नाटक कम्पनी छोड्छिन् र एकमात्र सन्तान हेनरीलाई लिएर आमासँग बस्न थाल्छिन् । चार्ली आफ्नो नाटकलाई भव्य रूपमा सबै तिर मञ्चन गर्न लागि पार्छ ।
दुबैलाई आफ्ना करियर प्यारो छ । दुबैका एकमात्र सन्तान दुबैलाई प्यारो छ । छुट्टिनका लागि र सन्तानको कस्टडीका लागि दुवैले वकिल हायर गर्छन् । यसरी दुईबिच एक प्रकारको युद्ध चल्छ ।
‘जुडि’ हेरिसकेर मैले कति पटक ‘somewhere over the rainbow’ सुनेँ त्यसको कुनै गन्ती नै छैन ।
अमेरिकन नायिका तथा गायिका ‘जुडि गारलेन्ड’को जीवनमा आधारित छ फिल्म- ‘जुडि’ ।
बाल्यकाल र उनको जीवनको अन्तिम समयलाई फिल्मले समानान्तर रुपमा देखाउँछ । उनको बिग्रिएको सम्बन्ध, भत्किएको करियर, शारीरिक समस्यालाई फिल्मले देखाएको छ ।
रङ्गिन कथा भित्रको रङ्गहिन व्यथा देखाउँछ ‘जुडि’ले ।
सात वर्ष अनि छ हजार तीनसय पन्नाको एउटा रिपोर्ट !
‘म्यारिज स्टोरी’मा पनि देखिएको ‘एडम ड्राइभर’को अभिनयको तारिफ जति गर्दा पनि कम हुन्छ । ‘रिपोर्ट’मा उनि संसदको कर्मचारी ‘डेनियल जे. जोन्स’को भुमिकामा छन् जसलाई ‘CIA’ को डिटेन्सन, इन्ट्रोगेसन, भिडियो टेप्समा अनुसन्धान गरि रिपोर्ट तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइन्छ ।
उनलाई सो रिपोर्ट तयार पार्न लगभग सात वर्ष जति लाग्छ जो छ हजार तिनसय पन्नाको हुन्छ । रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा उसले के-कस्ता रहस्यहरुको उजागर गर्छ ?